Election Day is Tuesday, May 17 - Somali | Multnomah County
Khamiis, Maayo 12, 2022
Xiriirada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)
Waraaqaha codbixinta la dhiibtay waa in la keenaa xafiiska doorashooyinka Degmada oo ku yaala Oregon ama Goobta Rasmiga ah ee Sanduuqa Codbixintu yaalo ugu danbayn 8 fiidnimo, Talaadada, Maayo 17, 2022, ama waa in boostada lasoo dhigaa laguna soo tariikheeyaa boostada Maayo 17, 2022 si loo tiriyo codadkaas.
Codbixiyaashu waxay adeegsan karaan Goobta ay doonaan Oo Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah Yaallo ay ku jiraan mid kasta oo kamid ah meelaha buugta la keeno ee 24 saac shaqeeya ee Maktabada Degmada Multnomah si qaab badqab iyo amaan leh loogu rido waraaqaha codbixinga. Si aad u hesho Goob Codaynta Rasmiga ah oo kuu Dhow, booqo multco.us/dropsites.
Dhamaan codbixiyaasha diiwaan-gashan waa inay helaan waraaqahooda codaynta. codbixiyaasha diiwaan gashan ee ayna soo gaadhin waraaqahooda codaynta ama u baahan in loo badalo waa inay la xidhiidhaan xafiiska Doorashooyinka. Degmada Multnomah, Adeegga Dalbashada Xili hore Waraaqaha Codaynta Badalka waxa uu codeeyayaasha u sahlayaa inay booqdaan multco.us/orderahead, ay dalbadaan badalka warqada codaynta iyo inay isku diyaariyaan "Waan Soo Hadlayaa." Codeeyayaashu waxay kadibna ka qaadan karaan warqadooda codaynta ee badalka ah Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah cinwaanka 1040 SE Morrison Street, Portland 97214 ama Xarunta Codbixinta Degdegga ah ee ku taala Dhisma Bari ee Degmada Multnomah ee cinwaankeedu yahay 600 NE 8th Street, Gresham 97030.
Codbixiyaasha ayaa sidoo kale wici kara Waaxda Doorashooyinka ee Degmada Multnomah oo laga wici karo 503-988-VOTE (8683) ama booqan kara laamaha SE Portland ma Greshamsi toos ah si ay u helaan caawimaad ama loogu badalo waraaqda codbixinta. Fadlan ogoow, gafuur xirka ayaa qasab ka ah gudaha Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah halkaasoo Xarunta Codbixinta Degdega ah ee Gresham ay ku taalo waayo waa goob dadka u dhexaysa taasoo bixisa adeegyada caafimaadka.
Doorashooyinka Degmada Multnomah saacadaha caadiga ah ee goobaha SE Portland iyo Gresham waxaa weeye 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo Isniin - Jimce.
Saacadaha shaqada la kordhiyay ee goobaha ku yaala SE Portland iyo Gresham waa:
Arbacada, Maayo 11 - Jimcada, Maayo 13 markay tahay 8 subaxnimo – 7 fiidnimo
Taladada, Maayo 17: 7:00 subaxnimo – 8:00 fiidnimo (Maalinta Doorashada)
Lasoco Warqadaada Codaynta: Codbixiyeyaashu way isdiiwaangelin karaan si ay ula socdaan codbixinta oo ay u helaan xayeysiis "Waan Codeeyay" ah oo astaan ah. Fariinta qoraalka ah, iimeel ama wargelin cod ah ayaa u sheegeysa codeeyayaasha marka ay xafiiska Doorashooyinka degmadu uu kusoo diro boosta warqada codaynta. Wargelinta ayaa sidoo kale muujinaysa hadii warqada codaynta la aqbalay ama hadii ay u baahan tahay in talaabo dheeraad ah laga qaado. Gudaha farriinta "Waan Codeeyay", cod bixiyayaashu waxay marin u heli doonaan warqadda Oregon ee gaarka ah oo ah istikar ay ku qoran tahay "Waan Codeeyay" oo baraha bulshada aad ku wadaagi karto. Adeegga Lasoco Waraaqdaada Codobixinta ayaa lagu heli karaa luuqada Ingiriiska iyo shan luuqadood oo kale. Codbixiyaasha Degmada Multnomah ayaa isdiiwaan gelin kara ayagoo booqanaaya multnomah.ballottrax.net.
30 kamid ah Xarumaha Sanduuqa Rasmiga ah ee Codbixinta ee Degmada Multnomah ayaa kuu adeegaaya
Degmada Multnomah waxay leedahay 30 Goobood oo Goobaha Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah oo la heli karo hadda ilaa 8 fiidnimo Maalinta Doorashada si aad u soo celiso warqadaada codbixinta. Goobaha Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah waxaa kamid ah dhammaan goobaha Maktabadda Degmada Multnomah. Codbixinta waxaa laga soo qaadayaa goobaha maktabada iyo Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah ee lagu Rido Codbixinta ayadoo la raacaayo jadwalka caadiga ah. Liiska Goobaha Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah waxaa laga heli karaa onlaynka iyo halkan hoosta.
Dukaanka Raashinka ee Green Zebra – 3011 N Lombard St. (Sanduuqa Codbixinta Rasmiga oo ku yaal qeybta dambe ee baabuurta la dhigto ee N Curtis Ave.) (fiiri qariirada)
Beerta McCoy (Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah) – waxa uu ku yaala koonaha koonfur bari ee Beerta McCoy oo u dhaw isgoyska North Trenton Street iyo North Trenton St. iyo North Newman Ave. – Keliya dadka Lugaynaaya) (arag qariirada)
Maktabadda Albina (Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah) –216 NE Knott St.
Maktabadda Hollywood (Sanduuqa Buuga Maktabadda Lagu Diro) – 4040 NE Tillamook St. (eeg khariirada)
Mqaayada McDonald (Sanduuqa Codbixinta Rasmiga ah) – 2010 NE César E. Chávez Blvd., wuxuu ku yaalaa dhanka galbeed ee N.E. 40th Ave. inta u dhexaysa NE Tillamook St. iyo NE Hancock St., una dhow aaga Maktabada Hollywood (qariirada)
Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah – 1040 SE Morrison St.
Pioneer Courthouse Square (Sanduuqa Rasmiga ah ee Codadka lagu Rido) – 700 dhismaha ee SW Broadway (ku xiga Starbucks iyo dhanka Nordstrom – Kaliya Dadka Yimaada) (eeg khariirada)
Xarunta Codbixinta Degdega – Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah, 600 NE 8th St. – Waxaa jira Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah oo ku yaal Xarunta Codbixinta Degdega ee Dabaqa Kowaad ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah. Waxa la heli karaa kaliya saacadaha goobta codbixintu ay furan tahay. Waxaad u baahan doontaa inaad gaadhiga meel soo dhigato kadibna usoo lugayso gugaha si aad u xareyso warqadaada codaynta. (eeg khariirada)
Maktabadda Troutdale (Sanduuqa Buugta Laybareeriga Lagu Diro) – 2451 SW Cherry Park Rd. (eeg khariirada)
Waxay furan tahay Abriil 25 - Maayo 17, 2022